Ọkachamara Semalt: Otu esi jikọọ na Web Design na SEO
Nchọpụta Nchọpụta Ngosi enwewo mgbanwe dị ịrịba aman'ime afọ ole na ole gara aga. Dị ka ọmụmaatụ, na oge ochie, nwa nwa SEO usoro dịka nchịkọta nri nwere ike ime ka ebe nrụọrụ weebụ gbasaa ngwa ngwaGoogle. Otú ọ dị, ọganihu nke teknụzụ na nyocha ọchụchọ, algọridim ọhụrụ ejirila tụnyere njirisi maka ogo nkeweebụsaịtị na engines ọchụchọ. Taa, ndị na-emepụta ebe nrụọrụ weebụ ewulitewo ngwaọrụ ndị ka mma bụ ndị nwere ike inyere gị aka ijikọta ụfọdụ akụkụ SEOmmebe nke weebụsaịtị. Ụlọ ọrụ weebụ ọ bụla ga - ejikọta SEO n'ime usoro ahụ tupu e weere ya dị ka ihe kwere ekwe.
Mgbe ị na-ekepụta ọdịnaya maka ebe nrụọrụ weebụ, chebaa njikọ ahụnke SEO analysis usoro dị ka okwu kwesịrị ekwesị nnyocha - altalene per parchi. Nchọpụta Nyocha Search bụ ihe kachasị nke na-eme ka ọdịnaya ahụ zukọtaahịa gị chọrọ ma rụpụta nsonaazụ ọchụchọ ntanetị. Ọtụtụ ndị ahịa nwere ike jiri nlezianya họrọ ọdịnaya ma ka na-enwetaederede kwesịrị ekwesị site na engines ọchụchọ dị ka Google. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ụlọ ahịa achọpụtawo ebe nrụọrụ weebụ ha na Googlen'ihi na ị gaghị eso ụzọ ahịa kwesịrị ekwesị.
Max Bell, Onye Ọrụ Nchịkọta Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwapụta ihe nrụpụta weebụ nke na-enye aka n'ịmepụta ọdịnaya mkpokọta weebụ bara uru.
HTML5 na-enye ikikere weebụ na bọọlụ site na engines ọchụchọchọta ma depụta ihe odide nke ebe nrụọrụ weebụ. Ihe ntanetị nke ejiri HTML5 na-anabata ma nwee ezigbo ahụmịhe ọrụ.Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị inwe oke bandwidth zuru oke na ngwugwu ngwugwu iji melite ọsọ nke ihe nkesa karịsịa n'oge ụfọdụnke okporo ụzọ. Ebe nrụọrụ weebụ HTML5 na-eme ka okporo ụzọ ndị ọrụ gaa na ebe nrụọrụ weebụ ahụ n'ihi na ha zuru oke na ịdị mfe..
2. Ihe Nlereanya Na-edozi
Nzaghachi nke weebụsaịtị bụ ihe eji arụ ọrụ na-agụnye ịmepụtaibe weebụ ndị na-arụkọ ọrụ na ọtụtụ ngwaọrụ na nyiwe yana arụ ọrụ na ọtụtụ nchọgharị ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ. Mgbe ị na-eji anzaghachi omume, ị gaghị aga ịgbanwee SEO URL. N'ihi ya, ị ga-erite uru site na nkwado zuru ezu nke SEO gaara abụfuru efu mgbe ị na-ekewa backlinks site na desktọọpụ na nsụgharị nsụgharị nke weebụsaịtị.
3. Mmasị na-achọpụta ihe
Ibe akwụkwọ ọdịda maka otu isiokwu dị na SEO kwesịrị ịgụnyeọdịnaya dị mkpa. Nke a dị mkpa n'ihi na ọtụtụ ndị na-efep saịtị ma ọ bụrụ na ọdịnaya adịghị mkpa, ọ dị ka ọ baghị uruma ọ bụ na e nwere ọtụtụ ngalaba na-ewepu ibe weebụ. Ntinye njikọ dị na weebụsaịtị kwesịrị ịbụ ebe a ma amanke nwere ike ime ka ọ dịkwuo mfe maka ndị ọrụ ijikwa ọrụ ha na ibe. Cheta, onye ọrụ kwesịrị ịbụ ihe mgbaru ọsọ nke ọganihu ọ bụlamkpokọta weebụ
4. Ngwa ngwa ngwa
Ka SEO dị irè, onye kwesịrị iji obere ọdịnaya nkekwesịrị ịmatakwu ihe. Ụfọdụ ndị ọkachamara SEO nwere ike ikwere na gụnyere ọdịnaya ndị ọzọ na ibe dị iche iche iji bụrụ ihe atọ iji nwetakwuo ọchụchọ.Otú ọ dị, ọ bụ mmadụ ole na ole nwere ike ịhọrọ ya karịa ọtụtụ nhọrọ. Ọ dị mkpa ịgụnye ọdịnaya niile na edemedenke na-abụghị oke ma ọ bụ na ndị na-ege ntị nwere ike ịnwụ ụfụ. Dịka ọmụmaatụ, ngwa Google dị ka Hummingbird ewetawo mgbanwe ndị ọzọnke nwere ike ime ka otu ngalaba dị iche iche dị na otu ibe ọdachi maka mgbalị SEO gị.
Ụfọdụ njirimara atụmatụ mmemme weebụ dị oke egwu maka usoro SEO dumọrụ. Maka onye ịmepụta ezigbo saịtị, onye na-azụ ahịa kwesịrị iji ya mee ihe na afọ ojuju. Ịnyocha amaokwu ndị a n'elu ga-eme ka mmekọrịta onye ọrụweebụsaịtị yana onye nwere ezigbo nyocha search engine nke bara uru maka onye ọrụ na ụlọ ọrụ n'onwe ya.